Tuesday October 26, 2021 - 16:22:03
Wararka ka imaanaya gobolka Galguduud ayaa sheegaya in dagaallo culus ay markale dib uga qarxeen deegaan muhiim oo maalmihii lasoo dhaafay lagu loolamayay.
Iska hor'imaadyo qaraar ayaa la sheegay in maalintii 4aad oo xiriir ah ay ka socdaan deegaanka Guriceel, sida ay wararku sheegayaan ciidamada dowladda iyo kuwa Galmudug ayaa guluf hor leh ku qaaday maleeshiyaadka Suufida Qabuura caabudka ah ee ku sugan Jaamacadda Guriceel.
Dad ku sugan Guriceel ayaa sheegay in dagaallada oo ah kuwa culus ay ku bilaawdeen madaafiicda goobta oo ciidamada huwanta ah ay ku ridayaan difaacyada maleeshiyaadka Max'med Shaakir.
Wararka ayaa intaas ku daraya in ciidamada dowladda ay xireen dhammaan waddooyinka lagasoo galo Guriceel iyagoo isku dayaya in gurmadka ay ka jaraan maleeshiyaadka Suufida Qabuuriyiinta ah.
Dagaalladii dhacayay sedaxdii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa sababay in 90% gacan ku heynta Guriceel ay ku dhacdo maamulka 'Galmudug' , hardanka udhaxeeya dhinacyadan ayaa gallaaftay nolosha ku dhowaad 200 oo ruux kuwaas oo ubadan dhinacyadii dagaallamayay.